မြောက်ပိုင်းအလင်းများ | Holmbygden.se
အဆိုပါ site ကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးအောက်
Holmes ဟာအပေါ်ဖြစ်ပါသည် 62 atmossfärenအတွက်မြောက်ပိုင်းအလင်းအိမ်အလွန် geomagnetic လှုပ်ရှားမှုနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလကြည့်ဖို့ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိပါတယ်ဘယ်မှာလတ္တီ. အောက်တွင်အလိုအလျောက်မြောက်ပိုင်းအလင်းအိမ်တွေ့မြင်နိုင်ရန်အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်ခန့်မှန်းချက် update လုပ်ဖြစ်ပါတယ်. အချိန်ကာလ UT အတွက်ကဒီမှာဖော်ပြထားကြောင်းမှတ်ချက်. ဆွီဒင်အချိန်နွေရာသီမှာ 1 နာရီရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလနှင့် +2နာရီ + နေသည်.
မြောက်ပိုင်းအလင်းများ, aurora borealis, နေရောင်ထဲကနေထွက်ချပစ်ကြောင်းလျှပ်စစ်သံလိုက်စွမ်းအင်ကိုနေရောင်ခြည်နေမီးတောက်ပေါ်မူတည်နှင့်ကမ္ဘာမြေရဲ့သံလိုက်စက်ကွင်းတာမျိုး. ထိုသို့သောအားဖြင့်စွမ်းအင်ကိုဖြန့်ချိခြင်းနှင့်အဆင်းလှသောထွန်းလင်းဖွဲ့စည်းရန်ဖြစ်ပါတယ်. မြောက်ပိုင်းတိုင်းအလင်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်လိုခငျြတစျခုလုံးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. သေးငယ်တဲ့ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ် ဒီမှာ, နော်ဝေမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ဒီမှာ သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတိုတောင်းသောလေ့ကျင့်ရေးကိုအမေရိကန်ရုပ်ရှင် ဒီမှာ.
မြောက်ပိုင်းအလင်းအိမ်ကောင်းသောမြင်ကွင်းအဘို့ရှင်းလင်းစွာရာသီဥတုလိုအပ်. အဘို့ခန့်မှန်းချက်အတွက်ပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ရှုပါ Holmes သို့မဟုတ် Sundsvall. ဆွီဒင်ကျော်ကလက်ရှိမိုးအုံ့အထူးဂြိုဟ်တုပုံရိပ်နိုင် ဒီမှာ.
magneto Gram Sundsvall (källa) လှုပ်ရှားမှု:
magneto Gram Sundsvall. ယင်းသံလိုက်စက်ကွင်းအတွင်းအကြီးစားသွေဖီပိုပြီးမြောက်ပိုင်းအလင်းအိမ်မှမြင့်တက်ပေးသည်. BZ (စိမ်းလန်းသော) မျဉ်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ရလိမ့်မည် (minusladdat) မြောက်ပိုင်းအလင်းများအဘို့ထင်ရှားစေခြင်းငှါ. အရင်းအမြစ်.
Hur läses tabellen? se fler ကူးယူ ဒီမှာ.
အပေါ်မြောက်ပိုင်းအလင်းများအဘို့ခန့်မှန်းချက် 30 ငါ့ကို (källa / källa)
အဆိုပါမော်ဒယ်ဘဲဥပုံပေါ် aurora များ၏စွမ်းအင်တွက်ချက် 30 ကနေဒေတာတွေကိုအပျေါအခွခေံမိ ACE-satelliten. တန်ဖိုးများမှာ <20 GW = အနည်းငယ်သာ / မရှိ, မြောက်ပိုင်းအလင်းအိမ်, 20-50 မြောက်ပိုင်းတိုင်းအလင်းများဖို့နီးကပ်ကြည့်ဖို့ GW = အခွင့်အလမ်း, >50 မိုဃ်းကောင်းကင်၌လှုပ်ရှားမှုနဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုအများကြီးနှင့်အတူကြည့်ဖို့ = ဂရိတ်အခွင့်အလမ်း. >100 GW = မြောက်ပိုင်းအလင်းများ Mil ရာပေါင်းများစွာကွာမြင်နိုင်ပါသည်. အဆိုပါမော်ဒယ်မရသာ aurora ဘဲဥပုံ၏ပြင်းထန်မှုကိုပြသပေမယ့်သင်တို့ကိုလည်းအခုဝင်ရိုးစွန်းမီးလုံးကိုကြည့်ရှုနိုင်သည့်နေရာတွင်. သင်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းပေါ်တွင်အနိမ့်ဝင်ရိုးစွန်းမီးလုံးကိုကြည့်ရှုနိုင်သည့်နေရာတွင်အနီရောင်လိုင်းပြသ. မြောက်ပိုင်းတိုင်းအလင်းများအနီရောင်လိုင်း၏alltåsမြောက်ဘက်မြင်နိုင်ပါသည်. ဖြစ်နိုင်ခြေအရောင်စကေးအားဖြင့်အဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ်.
ဘားဇယားရက်ပေါင်းnärsmstaမြောက်ပိုင်းအလင်းအိမ်များအတွက်ခန့်မှန်းချက်ကိုထောက်ပံ့ပေး. “KP-အညွှန်းကိန်း” geomagnetic လှုပ်ရှားမှုဆိုတာကိုပြသ. 1-3= တည်ငြိမ်သောသံလိုက်စက်ကွင်း, 4-5= Active ကိုသံလိုက်, 6-8= မုန်တိုင်း, 9= အကြီးစားမုန်တိုင်း. အဆိုပါ KP အညွှန်းကိန်းအနေဖြင့်3မြောက်ပိုင်းအလင်းအိမ် Holmes နှင့် Sundsvall ကနေမြင်စေနိုငျသောအခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ (källa).
Aurora ၏ခန့်မှန်းခြေအခွင့်အလမ်းကိုယနေ့ (källa 1, källa 2, källa 3)
Alaska geomagnetic အဖွဲ့အစည်းများထံမှခန့်မှန်းချက်, နော်ဝေ TV နဲ့ SpaceWeatherLive.com. Norr om den smala linjen finns möjlighet att se norrsken.
နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလအတွက်အစောပိုင်းကလှုပ်ရှားမှုနဲ့ရှေ့ဆက်ခန့်မှန်းချက် 4h (källa)
field ရှိုး data တွေကိုလေ့လာတွေ့ရှိ, အဝါရောင်လိုင်းခန့်မှန်းချက် data တွေကိုသရုပ်ဖော်နေစဉ်.
အာကာသရာသီဥတုအချက်အလက်များ၏ပိုပြီး Real-time gauge ကိုကြည့်ပါ Spaceweatherlive.com, NOAA / အာကာသမိုးလေဝသဘီဘာအိုရေးစင်တာ ဒီမှာ နှင့် ဒီမှာ, သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ထံမှ ACE-satelliten.
Tromsøအတွက် 360 ဒီဂရီမိုဃ်းကောင်းကင်အနှံ့က်ဘ်ကင်မရာ, နော်ဝေ, အရာမြောက်ပိုင်းတိုင်းအလင်းများနှင့်အတူဆွီဒင်၏မြင့်မားသောလတ္တီမြောက်ဘက်မှာမကြာခဏတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်.
20/3: C4.8 solar flare ... ဆက်ဖတ်ရန်
11/3: Coronal hole faces Earth ... ဆက်ဖတ်ရန်
10/3: Eruptive flares, NOAA G1 watch ... ဆက်ဖတ်ရန်